Bulchiinssi magaalaa Dassee buqqaatootaaf deggarssa taasiisuuf rakkachusaa ibse – ዜና ከምንጩ
Bulchiinssi magaalaa Dassee buqqaatootaaf deggarssa taasiisuuf rakkachusaa ibse
Finfinnee irraa fageenya kiiloo meetra 400 irratti kan argamtuu magaalaa Dassee lakkofsii buqqaatoota galanii dabalaa dhufuusaatiin deeggarsa namoomaa taasiisuuf rakkadheeraa jachuudhaan bullchiissi magaalaa dassee Addis Maaladaa beeksiseera.
Ittii gaafatamtuu qajeelcha dhimoota komuniikeshiinii magaalichaa kan ta’an Misaayee Kadir Addis maaladaatti akka himaniitti Waldaa fannoo diimaa,waajjirrii ittisa balaafii wabii nyaataa qaamooleen garaa garaa deggarsa taasiisaa yoo jiraataniis lakkofsii buqqaatootaa guyyaadhaa guyyaatti dabalaa dhufeef deggarsii namoomaa taasiifamaa jiru xinnoodha jadhaniiru.
Buqqaatoota guyyaa guyyaadhaan dhufan kessumeesuudhaaf deggarsa walitti aanaa ta’e barbaachisa jadhaniiru.gama motummaatiin yaroo muraasa qofaaf xiyyeeffannaa taasiisanii kan turan yammu ta’u yaroo amma dhimmichii iraanfatamaa dhufuusaatiin deggarssawwan hiriisaniiru jachuudhaan ibsaniiru Misaayeen .Kanaaniis buqqaatoota kessummeesuuf rakko guddaan nuu mudateera jachuudhaan kaasaniiru.Deggarsa ummanni magaalaa taasiisuu malee gama motummaatiin deggarsii walitti aanaa ta’e waan hinjjirref rakkorra jiraachuusaanii ibsaniiru.
Tasgabbiin magaaliichaa yaroodhaa yarootti foya’aa kan dhufee yoo ta’u lakkofsii namoota nannolee garaa garaatti buqqa’anii gara magaalatti galanii dabaluusaatiin labsiin yaroo attattamaa bahuusaa ittii gaafatamttun kuun yaadataniiru.
Akkaataama kanaan sochiin konkoolaachiifttota taaksiifii baratootaa amma galgala sa’atii lamaatti akkasumas baajaajonni amma saatii kudha lamaatti socho’u akka danda’an daanggessi sa’atii ka’ameera .
Hagayya 4 bara 2013 irraa jalqabee hojjira kan olee daanggessi sa’atii amma buqqaattonni gara magaalatti galan hiriisuuttii jadhameera.
Amma ragaan kuun itti qindaa’etti lakkofsii namootii gara magaalatti galanii dabalaa kan jiru yammu ta’u guyyaatti amma namoota 200 naannolee garaa garaatti gara magaalatti galaa jiru jadhaniiru.Kanaaniis buqqaattonni amma kuma 300 naannicha akka jiran eeraniiru.
Buqqaatonni gara magaalaa Dassee galaa jiran shororkkessittumaadhaan kan ka’amee ABUTiin wareerrii kan itti geggefamee kan akka Wallo kaabaa naanno Affaar ta’uu isaanii dubatu Misaayeen.Jiraattonnii magaalatti Wallo kaabatti argaman waliigalaa naanno Affaarii jiraattota Aanaa tokkoo akkasumas buqqaatonnii naannolee biraa gara magaalichaa galuu isaaniituu ibsame.
Buqqaatoota magaalaa Dassetti qubataniif buufataalee qubannaa ittin fayadamaa turan shan wixata darbbe gara sagalitti akka guddisan kan ibsan itti gaafatamttuun kuun buufataalee qubannaa kana kan hin fayadamnneefii fira bira kan jiran akka jiran eeraniiru.
Kuutaaleen hawaasaa bakka qubannaa kanaa jiran deggarsa namoomaa jiraattonni magaalattii taasiisaniin kan akka nyaataafii uffannaa gutuudhaan walta’uumsa isaanii agarsiisaa jiru jachuudhaan ibsaniiru.Dhaabbileen fayyaa magaalattitt argaman tajajila walaansaa kennuudhaaan akkasumas warren mahaalaqa qaban mahaalaqaan buqqaatoota deggaraa jiru jadhameera.
Tasggabbii magaalattii eguudhaaf jiraattonni naannoo naannosaaniitti gurma’iinsa mata mataasaanii umanni nanno isaanii eegaa jiraachuusaanii Misaayeen eeraniiru.
Dargaggonni tola oltootafii qaamooleen nageenyaa waliin ta’uudhaan gurma’iina ummataniin namootii haarwaa bakka biraatti dhufan magaalatti akka hin galle taasiisaa jiruus jadhameera.
Gurmaa’insii kuun buufataalee eegumsaa garaa garaa iratti bobbaasuudhaan eegumsa taasiifamu cimsuusaa ibsaniiru.
Naannicha hiidhattonni ABUT to’ataniiruu jachuudhaan oduun odefamuu goonka soba ta’uu isaas kaasaniiru.Odeeffanno dogoggoraa akkanaa gad dhiisuudhaan hawaasicha burjaajeesuun soodaa uumuudhaaf hojjachaa jiraachuusaaniis ittii gaaafatamttuun kuun eeraniiru.
Addis Maaladaan kanaan dura naanoolee Walloo kaabaa garaa garaa irraa buqa’anii buqqaatoota gara Komboolchaafi Dassee galan rakkoon nyaataafii bakka qubannaa akka mudateenii akka ture gabaasuun ishee kan yaadatamuudha.
Total views : 6422010